Diyaaradda Boeing 737 Max 8 oo si isxigxigta looga mamnuucay waddamo badan - Halbeeg News
in Caalamka, War Degdeg, Xulka
diyaarad Boing 737 max 8 ah xuquuqda sawirka: france24.com
WASHINGTON(HALBEEG)-Mamnuucidda diyaaradda Boeing 737 Maxi 8 ayaa arbacadii noqday mid sii karaar qaadanaya kaddib markii uu madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu ku biiray waddamada ay kamidka tahay Kanada ee dalalkooda ka mamnuucay diyaaraddan kadib markii ay soo korodhay baqdinta laga qabo halista ay u nugul yihiin rakaabka ku duula diyaaraddan.
Waxaa isa soo taraya walwalka laga qabo hannaanka badbaadada diyaaradda Boeing 737 Maaksi 8 kadib markii todobaadkan ay dalka Itoobiya ku burburtay diyaarad Boing 737 max 8 ah oo sidday in ka badan 150 qof.
Madaxwene Trump oo isha ku hayay warbixinadda arrinkan ku aaddan ayaa yiri “Wax aan qorsheyneynaa in aynu soo saarno amarro degdeg ah oo aynu ku mamnuuceyno in ay Mareykanka soo cagadhigtaan diyaaradaha noocoodu yahay Boeing 737 Maakis 8 iyo 9” ayuu yiri Taraam oo la hadlayay warfidiyeenada ka howlgala aqalka cad ee Mareykanka “Badbaada dadka Mareykanka ah iyo dhammaan dadka kale waa muhiimaddeena koowaad”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Maamulka laanta duulista hawada Madeykanka ayaa sheegay in go’aankan uu la xiriiro xogo laga soo aruuriyay baaritaanno laga sameeyay diyaaraddii ku dhacday meel u dhow Addis Ababa iyo sidoo kale xog laga helay Satellite-ka.
Mareykanka ayaa mamnuucay Boing 737 max 8 iyo 9. Burburka diyaaradda Boing 737 max 8 ee dalka Itoobiya ayaa dhalisay tuhumo farta ku fiiqeysa farsamada diyaaradahan iyadoo bishii Oktoobar ay dalka Induniisiiya ku burburtay mid kale oo sidday 189 qof.
Qarax maanta ka dhacay gobolka Baay oo sababy dhimashada shan qof iyo dhaawaca 40 kale